Nepal Auto | अटो भिलेजलाई धुलो मुक्त क्षेत्र बनाउने प्रयासमा छु : अध्यक्ष सन्तोष पाण्डे
अटो भिलेजलाई धुलो मुक्त क्षेत्र बनाउने प्रयासमा छु : अध्यक्ष सन्तोष पाण्डे 32 Shrawn, 2074
२०३२ सालमा रुपन्देहीको भैरहवामा जन्मिएर लामो समयदेखि बुटवलमा व्यवसाय गर्दै आएका बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष पाण्डे अब अटो व्यवसायका क्षेत्रमा चिनाइरहनु पर्ने नाम होइन । उनी हाल जुपिटर अटो डिस्ट्रव्युटर्स प्रालि र नर्थ हाइड्रो इन्जिनियरिङ प्रालिमा अध्यक्षको रुपमा समेत आवद्ध छन् । प्रस्तुत छ अटो क्षेत्रका विषयमा पाण्डेसँग नेपाल अटोका लागि दामोदर खनालले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
अटो व्यवसायमा कहिले देखि लाग्नुभयो ?
बुटवलको ट्राफिकचोकको पूर्व तिर पुरानो बसपार्कमा २०३२ सालमा अनन्त मोटर पार्ट्सको पसल खोलेर बुबा उमानाथ पाण्डे यो पेशामा लाग्दै आउनु भयो । पछि म्यानेजिङ डाइरेक्टरको रुपमा २०५२ सालदेखि काठमाडौँ अनन्त मोटर पार्ट्स बुटवल नाम राखेर यो व्यवसायमा मेरो संलग्नता भयो । बुवाले यो पेशा गर्दै आउनुभएकोले पहिले देखि नै यो क्षेत्रका बारेमा केही जानकारी भएकोले पनि यो अटो व्यवसाय मेरो व्यवसायको पनि रोजाई बन्न पुगेकोे हो ।
हाल के के काममा संलग्न हुनुहुन्छ ?
बुटवल मैनाबगरमा काठमाडौँ अनन्त मोटर पार्ट्सको संचालक छु भने जुपिटर अटो डिस्ट्रव्युटर्स प्रालिको म्यानेजिङ डाइरेक्टर तथा नर्थ हाइड्रो इन्जिनियरिङ प्रालिमा अध्यक्षको रुपमा आवद्ध छु । त्यस्तै लायन्स क्लब अफ फूलवारी बुटवलमा डाइरेक्टरको रुपमा कार्यरत छु ।
तपाई संलग्न संस्थाहरुमा के कस्ता कामहरु हुन्छन् ?
जुपिटर अटो डिस्ट्रव्युटर्स १५ जनाको लगानीमा संचालित छ । यहाँ मोटर पार्ट्सको होलसेल कारोबार हुन्छ । नर्थ हाइड्रोमा हाइड्रो सम्बन्धी सामान उत्पादन गरि जडान गर्ने काम गर्दछौँ । यो संस्था संचालन भएको ३ वर्ष भयो । नेपाल अधिराज्य भरका अर्डर अनुसार सामानहरु निर्माण र फिटिङ गर्छौ भने भविष्यमा हाम्रो टिमले विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेत लिएका छौँ । हामीले काठमाडौँ अनन्त मोटर पाटर््स बुटवल, बुटवलमा लामो समय देखि चलाउँदै आएका छौँ । जहाँ टाटा, ठुलो हेभी गाडीका सबै पार्टपूर्जा, अशोक लेल्यान्ड गाडी, आइसर, स्वराज माज्दाका पार्टपूर्जा बिक्री वितरण गर्दै आएका छौँ ।
बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुहन्छ, के कस्ता कामहरु गर्नुभयो त ?
विगतमा बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्षहरुले अगाडि बढाएका महत्वपूर्ण कामहरुलाई निरन्तरता दिदैँ आएका छौँ । एडिबिको थ्रि पि विकासको काम अगाडि बढाउने प्रयत्नमा छौँ । सबै व्यवसायीलाई खुशी बनाएर यो अटो भिलेजलाई नमुना अटो भिलेज बनाउन क्रियाशिल रहँदै आएको छु । र हालमा लामो समय देखि हुन नसकेको यो थ्रि पिको काम अगाडि बढाउन एडिबि र नगरपालिकासँग सहमति पनि भैसकेको छ । एडिबिको यो कार्यक्रम यो क्षेत्रमा लागु गर्न सफल भयौँ भने अटो भिलेजमा ठूलो परिवर्तन आउने छ र व्यवसायीलाई फाइदा हुने महसुस गरेको छु ।
अरु के कस्ता महत्वपूर्ण काम गर्नुभयो ?
अटो व्यवसायी तथा मजदुरहरुलाई आवश्यकता अनुसार तालिम प्रशिक्षण, अटो व्यवसायी मिस्त्रीलाई नयाँ गाडी, युरो ३, युरो ४ मोडेलका गाडीको प्रशिक्षण तालिम, सेनाका जवानहरुलाई अटो सम्बन्धि प्रशिक्षण दियौ । यो अटो भिलेजमा पानी जम्ने, खाल्डाखुल्डी, बर्षामा हिलो हिउँदमा धुलो जस्तो प्रदुषित वतावरणले मजदुर, व्यवसायी निकै समस्यामा थिए । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर खाल्डाखुल्डी पुर्यौं, सरसफाइको महाअभियान नै संचालन गरेका छौँ । हरेक महिनाको अन्तिम साता अटो व्यवसायीहरु नियमित सरसफाइमा जुटेका छौँ । यो पनि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यस्तै मैनाबगर भित्र रहेको कल्याणकारी कोष काटेका अटो व्यवसायी र मजदुर वर्गमा कल्याणकारी कोषको राशी बढाउने तयारी पनि गरेका छौं ।
भावी महत्वपूर्ण योजना के छन् त ?
मैले अगाडि पनि भने एडिबिको थ्रि पि प्रोजेक्टलाई सफल पार्ने, अटो भिलेजलाई धुलो मुक्त प्रदुषण रहित क्षेत्र बनाउने । त्यसका लागि सरसफाई महाअभियान पनि संचालन भइसकेको छ । यसमा नगरपालिका र सरोकारवाला निकायले सहयोग गरे अटो भिलेज क्षेत्रलाई साँच्चै नमुना क्षेत्र बनाउने प्रयासमा सफल हुने छौँ । अटो व्यवसायी साथीहरुबाट पनि राम्रो सहयोग मिल्दै आएको छ । अटो क्षेत्रमा निकै प्रतिस्पर्धा छ । अन्य ठाउँमा पनि अटो ग्यारेज खुलेका छन् । अव हामी मिलेर अगाडि नबढ्ने हो भने धेरैले यो पेशाबाट हात धुनपर्ने अवस्था आउने छ । तसर्थ बुटवलको मैनावगरमा राम्रो गुणस्तरीय सेवा पाइन्छ भन्ने छाप पार्न आवश्यक छ ।
अटो क्षेत्रमा खास समस्या के छन् ?
यो क्षेत्रमा ढल नाली, खानेपानी सरसफाई अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । एडिबिको प्रोजेक्ट लागु हुन्छ भनेर नगरपालिकाले पनि यो क्षेत्रको बिकास निर्माणका लागि केही वर्षदेखि खासै ध्यान दिएको छैन । पछिल्लो समय ट्राफिकको समस्या पनि बढ्दो छ । मजदुर वर्गहरुमा हिसाब किताव राख्न समस्या देखिदै आएकाले एकद्वार कर प्रणाली हुन सक्यो भने अटो व्यवसायीलाई ठुलो सहयोग हुनेछ । त्यस्तै लोन सर्वसुलभ छैन, यो क्षेत्रमा उधारोमा काम गर्नु पर्छ ।
अनि यो अटो क्षेत्रको स्पष्ट नीति नियम नहुँदा अटो व्यवसायीहरु धेरै समस्या भोग्न बाध्य छौँ । करिब ६ सय अटो व्यवसायी बसोबास गर्ने यो क्षेत्रमा विद्युतको समस्या पनि जल्दो बल्दो रुपमा छ । लो भोल्टेज, पटक पटक ट्रिपिङले गर्दा बडी कारखाना, अन्य कल कारखाना लगायतका अटोसँग सम्बन्धित कामहरु निकै प्रभावित भएको छ ।
बुटवलको मैनाबगरमा अवस्थित अटो भिलेज देशकै नमूना अटो भिलेज हो । तर पनि लामो समयदेखि अटो भिलेज बिकासमा पछाडि परेको छ । यो क्षेत्रको बिकासका लागि सवै सरोकारवाला निकाय र अटो व्यवसायीवाट सहयोगको अपेक्षामा छु । यो क्षेत्रलाई प्रदुषणमुक्त धुलो रहित ठाउँ बनाउन बिकास निर्माण गर्न मेरो टिम क्रियाशील रहने छ ।